सबै शव हामीले गए र संकलन गरेर... रातभर आगो बालेर निगालोको झ्याङमुनि बसी शव कुर्‍यौँ। - Nepali news..
सबै शव हामीले गए र संकलन गरेर… रातभर आगो बालेर निगालोको झ्याङमुनि बसी शव कुर्‍यौँ।
ताप्लेजुङको सिस्नेभीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएर उद्धार गर्न जानु पर्ने आदेश अनुसार हामी सुकेटार हुँदै दुर्घटनास्थल पुगेका हौँ ।नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हामी दुर्घनास्थल डोरीको सहायताले झरेका हौँ । त्यहाँ पुग्दा शव छरपष्ट अवस्थामा थियो । हेर्ने मान्छेहरु थिए, तर कसैले शव संकलन गरेका थिएनन् । शव छरपष्ट भए पनि कसैले संकलन गरेका रहेनछन् ।शव हामीले नै गएर संकलन गरेका हौँ । शव पहिले नै संकलन भएको भए बुधबार नै सबै शव सुकेटार विमानस्थल ल्याउन सकिने थियो ।सबै शव हामीले गए र संकलन गरेर पोको पारेका हौँ ।
चारवटा शव पोको पारेर बुधबार बेलुका नै पठाउन सकियो । तर तीनवटा शव भने सकिएन ।संकलन गरेर पोको पार्दा नै मौसम खराब भयो । त्यसपछि पनि हामीले डोकोमा बोकेर शव सुकेटारसम्म ल्याउने कोशिस गरेका थियौँ । तर बाटो अप्ठ्यारो र मौसम खराब भएका कारण सकिएन ।शव त्यहिँ छोडेर आउने कुरा भएन ।हामीलाई आदेश थियो–शव लिएर आउने वा शव कुरेर बस्ने । हामी तीनवटा शव कुरेर बस्यौँ । हामी ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा हामी २०–२१ जना रातभरि शव कुरेर बस्यौँ ।
आफू पनि झुण्डिएर हेलिकप्टरमा शव ल्याउँदै गरेका सेनाका उद्धारकर्मी प्रताप लामा र तेजबहादुर घले। रातभरि ठूलो हिउँ पर्‍यो । पानी पनि परेको थियो । हामी शवको नजिकै आगो बालेर रातभर बस्यौँ । निगालोको झ्याङको ओत पारेर बसेका थियौँ । राति हामीले चाउचाउ र चिउरा खायौँ ।बिहान हुने बित्तिकै मौसम केहीबेर खुल्यो । हेलिकप्टर आयो, हामीले शव पठायौँ । यस किसिमको दुर्घटना र विपदको उद्धारको तालिम लिएकाले म र अर्को एकजना (तेजबहादुर घले, उनी पनि प्रतापसँगै उद्धारका लागि गएका थिए) शवसँगै डोरीमा झुण्डिएर सुकेटारसँग विमानस्थलमा आयौँ ।
यसरी नआएको भए, हिँडेर आउनु पर्ने थियो र हामीले तालिम लिएकाले यसरी आउन सक्यौँ ।उद्धारकर्मी प्रताप अहिले सुकेटार विमानस्थलमा छन् ।दुर्घटना तथा अरु विपत्तमा उद्धारमा धेरै खटिएको थिएँ तर जंगलमा रातभर हिउँ परेको ठाउँमा खुला आकाशमुनि बसेर उद्धारको काम गरेको यो पहिलोपटक हो ।हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलमा बस्ने अवस्था थिएन । हामी रातभर बसेर शव कुरियो । यसरी नबसेको भए जंगली जनावरले शव तितरवितर पार्ने डर हुन्थ्यो ।चिसोमा निकै कठ्याङ्ग्रिएर बसे पनि उद्धार गर्न सकियो ।( सिधाकूराअनलाइनबाट)
Prevशोकमग्न काठमाडौं ! भावबिहल आफन्त गुमाएकाहरु- हेर्नुहोस ( लाइभ ) भिडियो सहित
Nextनेपाल आइडलका निशान भट्टराइले पाए एक करोड- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
चर्को नाराबाजीका साथ झगडा पर्‍यो भुत घर भनिने टिकाथलिमा ! रविलाई फसाउने रणनीति भन्दै (भिडियो सहित )
यति सस्तो अनि राम्रो बाइक, किन खर्च गर्नु पर्यो २-३ लाख ?- हेर्नुहोस (भिडीयो सहित )
कन्टेनर’भित्रबाट निसासिदै छोरीले ‘मर्दै’छु’भनेर म्यासेज पठाएर बितेकी छोरीको पिताले यसरी पोखे पीडा हेर्नुहोस
चीनबाट आयो सारा नेपालीका लागि यस्तो खुशीको खवर।